Ongai Jehovha Mukomborerwe | Yokudzidza
“Ongai Jehovha, nokuti akanaka.”—PIS. 106:1.
Tingadzidzei kuna Pauro panyaya yekuonga?
Kufungisisa uye kunyengetera kunotibatsira sei kuti tirambe tiri vanhu vanoonga?
Kufunga nezvemakomborero atiinawo kunotibatsira sei kuti titsungirire miedzo?
1. Nei tichifanira kuonga Jehovha?
TINOFANIRA kuonga Jehovha nokuti anotipa “zvipo zvose zvakanaka nezvinopiwa zvose zvakakwana.” (Jak. 1:17) Semufudzi wedu ane rudo, anotipa zvokurarama nazvo uyewo zvatinoda kuti tirambe tiine ukama naye. (Pis. 23:1-3) Jehovha ndiye “nzvimbo yedu yokupotera nesimba redu,” kunyanya patinosangana nematambudziko. (Pis. 46:1) Saka tine zvikonzero zvakawanda zvokuti timuonge sezvakaita munyori wepisarema uyo akati: “Ongai Jehovha, nokuti akanaka; nokuti mutsa wake worudo unogara nokusingagumi.”—Pis. 106:1.
Rugwaro rwedu rwegore rwa2015: “Ongai Jehovha, nokuti akanaka.”—Pisarema 106:1
2, 3. (a) Chii chingaitika kana tikatadza kukoshesa makomborero atiinawo? (b) Tichakurukura mibvunzo ipi munyaya ino?
2 Nei zvichikosha kuti tikurukure nezvenyaya iyi yekuonga? Bhaibheri rakafanotaura kuti mumazuva okupedzisira maizova nevanhu vasingaongi, uye tiri kuona uprofita uhwu huchizadziswa. (2 Tim. 3:2) Vanhu vakawanda havakoshesi zvinhu zvakawanda zvavakaitirwa naMwari. Vakawanda havagutsikani nezvavainazvo, asi vanoramba vachingoda kuunganidza zvinhu zvakawanda zvinoshambadzirwa nevanhu vemabhizimisi. Isuwo tinogona kupedzisira tava kuita sevanhu ivavo. Tingapedzisira tisisaongi sezvakaita vaIsraeri vekare, totadza kukoshesa ukama hwedu naJehovha uye makomborero aakatipa.—Pis. 106:7, 11-13.
3 Fungawo zvinogona kuitika patinowirwa nematambudziko. Panguva dzakadaro, tinogona kunetseka chaizvo zvokuti tinotadza kufunga nezvemakomborero atiinawo. (Pis. 116:3) Saka tingaita sei kuti tive vanhu vanoonga? Uye chii chingatibatsira kuti tisaora mwoyo patinotarisana nemiedzo yakaoma? Nyaya ino ichakurukura mibvunzo iyi.
“IMI MAKAITA ZVINHU ZVIZHINJI, HAIWA JEHOVHA”
4. Tingaita sei kuti tive vanhu vanoonga?
4 Kana tichida kuva vanhu vanoonga, tinofanira kubvuma kuti Jehovha akatikomborera, tofungisisa pamusoro pemakomborero iwayo aakatipa. Tinofanirawo kufunga nezvemabasa ake anoratidza kuti ndiMwari ane mutsa worudo. Mumwe munyori wepisarema paakaita izvi, akashamiswa chaizvo nemabasa akaitwa naJehovha.—Verenga Pisarema 40:5; 107:43.
5. Tingadzidzei kuna Pauro panyaya yekuonga?
5 Tinogona kudzidza zvakawanda nezvekuonga kubva kumuapostora Pauro. Muminyengetero yake, aigara achionga Mwari zvinobva pamwoyo. Izvi zvinoratidza kuti aifungisisa nezvemakomborero aakanga apiwa. Pauro aiziva kuti asati ava muKristu aimbova “munhu anomhura nomutambudzi nomunhu aiita zvakaipa.” Izvi zvakaita kuti aonge Mwari naKristu nokuti vakamuratidza ngoni vakamupa ushumiri kunyange zvazvo aimbova mutadzi. (Verenga 1 Timoti 1:12-14.) Pauro aikoshesawo hama dzake dzechiKristu uye aionga Jehovha nokuda kwehama idzi nokuti dzaiva neunhu hwakanaka uyewo dzaishumira Jehovha dzakatendeka. (VaF. 1:3-5, 7; 1 VaT. 1:2, 3) Paaisangana nematambudziko, aikurumidza kuonga Jehovha nokumubatsira kwaaiita achishandisa hama dzake dzechiKristu. (Mab. 28:15; 2 VaK. 7:5-7) Saka hazvishamisi kuti Pauro akakurudzira vaKristu kuti: “Imi ratidzai kuti munoonga . . . , muchirayirana nemapisarema, nziyo dzokurumbidza Mwari, nziyo dzomudzimu nenyasha.”—VaK. 3:15-17.
KUFUNGISISA UYE KUNYENGETERA KUNOTIBATSIRA KUTI TIVE VANOONGA
6. Pazvinhu zvose zvawakaitirwa naJehovha ndechipi chaunonyanya kuonga?
6 Tingatevedzera sei Pauro panyaya iyi? Mumwe nomumwe wedu anofanira kufungisisa zvaakaitirwa naJehovha sezvaiitwa naPauro. (Pis. 116:12) Kana ukabvunzwa kuti: ‘Ndeapi makomborero awakapiwa naJehovha aunoonga?’ ungati kudii? Ungataura nezveukama hwako naJehovha here kana kuti chibayiro chorudzikinuro icho chinoita kuti ukanganwirwe zvivi? Ungataurawo mazita ehama nehanzvadzi dzakakutsigira pawaitarisana nematambudziko akasiyana-siyana here? Ungatotaurawo nezvewawakaroorana naye kana kuti vana vako. Kufungisisa makomborero akadai anobva kuna baba vedu vane rudo, Jehovha, kuchaita kuti ude kugara uchimuonga zuva nezuva.—Verenga Pisarema 92:1, 2.
7. (a) Nei tichifanira kunyengetera tichitenda Jehovha? (b) Makomborero api auchawana kana ukanyengetera uchionga Jehovha?
7 Kufungisisa nezvemakomborero atiinawo kunoita kuti tikwanise kunyengetera kuna Jehovha tichimutenda. (Pis. 95:2; 100:4, 5) Vanhu vakawanda vanofunga kuti unofanira kungonyengetera kuna Mwari kana uine zvauri kuda. Asi isu tinoziva kuti Jehovha anofara patinomuonga nemhaka yezvatiinazvo. MuBhaibheri mune minyengetero yakawanda yokuonga kusanganisira waHana newaHezekiya. (1 Sam. 2:1-10; Isa. 38:9-20) Saka tinofanirawo kuva vanhu vanoonga sezvakaitwa nevashumiri vaMwari ivavo vakatendeka. Nyengetera uchionga Jehovha nemhaka yemakomborero auinawo. (1 VaT. 5:17, 18) Kana ukadaro uchawana makomborero akawanda. Uchafara, uchawedzera kuda Jehovha uye uchaswedera pedyo naye.—Jak. 4:8.
Makomborero api awakapiwa naJehovha aunoonga? (Ona ndima 6, 7)
8. Chii chingaita kuti tipedzisire tisisaongi zvose zvatakaitirwa naJehovha?
8 Kana tikasangwarira, tinogona kupedzisira tava vanhu vasingaongi zvatinoitirwa naJehovha. Nei zvakadaro? Takangofanana nevabereki vedu vokutanga Adhamu naEvha. Pafunge, Jehovha akavapa paradhiso yakanaka kuti uve musha wavo. Hapana chavaishayiwa uye vaikwanisa kurarama nokusingaperi murugare. (Gen. 1:28) Asi vakatadza kukoshesa makomborero iwayo. Vaitoda zvakawanda kupfuura zvavaiva nazvo. Pakupedzisira, vakarasikirwa nazvo zvose. (Gen. 3:6, 7, 17-19) Tiri kurarama munyika ine vanhu vasingaongi saka zviri nyore kuti tipedzisire tisingachaoni zvose zvatakaitirwa naJehovha. Tinogona kupedzisira tisingachakoshesi ushamwari hwedu naye uyewo ropafadzo yatiinayo yokuva musangano rehama dzomunyika yose. Tingatotangawo kuti sika-sika nokutsvaka zvinhu zviri munyika ino yava pedyo kupfuura. (1 Joh. 2:15-17) Kuti izvozvo zvisaitike kwatiri, tinofanira kufungisisa makomborero atakapiwa uye togara tichionga Jehovha neropafadzo yatiinayo yokuva vanhu vake.—Verenga Pisarema 27:4.
9. Patinosangana nemiedzo yakakura, nei tichifanira kufungisisa nezvemakomborero edu?
9 Kuva vanhu vanoonga kunogona kutibatsira kuti titsungirire miedzo yakakura. Patinosangana nematambudziko akakura akadai seurwere, kufirwa, kana kuti njodzi dzinongoitika dzoga, tinganzwa taomerwa zvikuru zvokuti tinoshaya zvokuita. Tinorwadziwawo chaizvo kana munhu watakaroorana naye akaita upombwe. Patinosangana nematambudziko akadaro tinogona kunyaradzwa kana tikafunga zvinhu zvakanaka zvatakaitirwa naMwari. Ngatimboonai zvakaitika kune vamwe vashumiri vaMwari.
10. Irina akabatsirwa sei nokufunga makomborero ake?
10 Mumwe piyona wenguva dzose wokuUnited States anonzi Irina * ainge akaroorwa nemukuru muungano. Murume wacho akaita upombwe achibva amusiya oga nevana. Chii chakabatsira Irina kuti arambe achishumira Jehovha pasinei nemuedzo uyu? Anoti: “Ndinoonga Jehovha nokuti ane hanya neni. Zuva nezuva ndinofunga makomborero ose andiinawo, uye izvozvo zvinondibatsira kuona kuti kuzivikanwa uye kudiwa naBaba vedu vokudenga iropafadzo yakakura chaizvo. Ndinonyatsoziva kuti havazombondisiyi.” Kunyange zvazvo Irina akasangana nemiedzo yakawanda muupenyu hwake, kugara achifara kunomubatsira kuti arambe achishumira Jehovha uye akurudzirewo vamwe.
11. Chii chakabatsira Kyung-sook kurarama aine chirwere chakakomba?
11 Kyung-sook uyo anogara kuAsia aipayona pamwe chete nemurume wake kwemakore anopfuura 20. Chiremba akamuudza kuti aiva nekenza yemapapu uye ainge asarirwa nemwedzi inenge mitatu kana kuti mitanhatu yokurarama. Kunyange zvazvo iye nemurume wake vainge vambosangana nemiedzo yakasiyana-siyana muupenyu hwavo, havana kumbobvira vatyira utano hwavo. Akati: “Kurwara kwakandivhiringa zvikuru zvokuti ndakanga ndisisina tariro uye ndaitya chaizvo.” Chii chakabatsira Kyung-sook kutsungirira dambudziko iri? Anoti: “Manheru oga oga ndisati ndarara ndinoenda pamusoro pemba yedu ndonyengetera zvinonzwika ndichionga Jehovha nemhaka yezvinhu zvishanu zvaanenge andiitira zuva iroro. Izvi zvinoita kuti ndisanyanya kunetseka uye ndinobva ndanzwa ndichida kuratidza Jehovha kuti ndinomuda.” Kyung-sook anobatsirwa sei nekunyengetera kwaanoita? Anoti: “Ndava kunyatsoona kuti Jehovha anotitsigira patinotarisana nemamiriro ezvinhu akaoma uye kuti miedzo yatinosangana nayo mishoma chaizvo kana tichienzanisa nemakomborero atinawo.”
Aine hanzvadzi yake imwe chete yasara inonzi John (Ona ndima 13)
12. Chii chakabatsira Jason kuti asanyanye kurwadziwa pashure pokunge afirwa nomudzimai wake?
12 Jason, uyo anoshanda pane imwe hofisi yebazi iri muAfrica, ava nemakore 30 ari mubasa renguva yakazara. Anoti: “Ndakafirwa nomudzimai wangu makore manomwe akapfuura uye dzimwe nguva ndinomborwadziwa zvikuru. Kuramba ndichifunga kutambura kwaaiita paairwara nekenza kunondirwadza chaizvo.” Chii chakabatsira Jason kuti atsungirire dambudziko rake? Anoti, “Rimwe zuva ndakafunga nezvekufara kwandakamboita nemudzimai wangu uye ndakanyengetera ndichionga Jehovha kuti ndakambova nenguva yakanaka zvakadaro. Ndakatanga kunzwa zviri nani, saka kubvira panguva iyoyo ndinogara ndichionga Jehovha nenguva idzodzo dzinofadza dzandakava nadzo nemudzimai wangu. Kuonga zvandakaitirwa naJehovha kuri kundibatsira kuti ndigare ndichifara. Ndichiri kurwadziwa, asi kuonga Jehovha nokuti akaita kuti ndive newanano yakanaka uye kuti ndaimushumira nemudzimai aimuda kunoita kuti ndifare.”
“Ndinoonga zvikuru kuti Jehovha ndiMwari wangu.”—Sheryl
13. Chii chakabatsira Sheryl kuti atsungirire kufirwa kwaakaitwa nevanhu vakawanda vomumhuri make?
13 Muna 2013, mumwe musikana wokuPhilippines anonzi Sheryl uyo aiva nemakore 13 chete, akarasikirwa nezvinhu zvakawanda pakaitika rimwe dutu rine simba chaizvo rinonzi Haiyan. Sheryl akati: “Imba yedu yakaparara uye ndakafirwa nehama dzangu dzakawanda.” Baba vake naamai vake nevamwe vana vatatu vemumba mavo vakafa pakaitika dutu iri. Chii chakabatsira Sheryl kuti atsungirire dambudziko rake? Anoonga Jehovha nemhaka yemakomborero aainawo. Sheryl akati: “Ndakaona zvose zvaiitwa nehama nehanzvadzi kuti dzibatsire uye dzikurudzire vaya vose vaida rubatsiro. Ndaiziva kuti hama dziri pasi pose dzaindinyengeterera.” Akatiwo: “Ndinoonga zvikuru kuti Jehovha ndiMwari wangu. Anogara achitipa zvatinoda kuti tirarame.” Izvi zvinoratidza kuti kuonga makomborero atiinawo kunotibatsira kuti tisanyanye kushungurudzika. Kuonga kunotibatsira kuti titsungirire matambudziko ose angatiwira.—VaEf. 5:20; verenga VaFiripi 4:6, 7.
“INI NDICHAPEMBERERA JEHOVHA NOMUFARO”
14. Ndeipi tariro inofadza yatiinayo? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
14 Kubvira kare, vashumiri vaJehovha vagara vachimuonga nokuda kwemakomborero avainawo. Somuenzaniso, vaIsraeri pavakanunurwa paGungwa Dzvuku vakafara chaizvo zvokuti vakaimbira Jehovha nziyo vachiratidza kuti vaimuonga uye vaimurumbidza. (Eks. 15:1-21) Mazuva ano, tiri kutarisirawo kununurwa pazvinhu zvose zvinoita kuti tirwadziwe uye tishungurudzike, uye ichocho chikomborero chakakura chaizvo. (Pis. 37:9-11; Isa. 25:8; 33:24) Fungidzira kuti tichafara zvakadini Jehovha paachaparadza vavengi vake vose ounza nyika itsva ine rugare nokururama. Iroro richava zuva rokuti tionge Jehovha!—Zvak. 20:1-3; 21:3, 4.
15. Watsunga kuitei mugore ra2015?
15 Tinotarisira kuti Jehovha achatipa makomborero akawanda mugore ra2015. Kunyange zvakadaro, tinogonawo kusangana nematambudziko. Asi tinoziva kuti Jehovha haazombotisiyi. (Dheut. 31:8; Pis. 9:9, 10) Haazomboregi kutipa zvose zvatinoda kuti tirambe tichimushumira takatendeka. Saka, ngatitsungei kuti tive nemaonero aiva nemuprofita Habhakuki uyo akati: “Kunyange kana muonde ukarega kutumbuka, uye pamizambiringa pakasava nezvibereko; kunyange basa romuorivhi rikakundikana, minda yakatenuka-tenuka ikasabereka zvokudya; kunyange makwai akapera mudanga, uye mumatanga mukasava nemombe; ini ndichapemberera Jehovha nomufaro; ndichafarira Mwari wokuponeswa kwangu.” (Hab. 3:17, 18) Gore rino rose dai tikafungisisa makomborero atakapiwa naMwari uye toita zvinotaurwa nerugwaro rwedu rwegore rwa2015 rwunoti: “Ongai Jehovha, nokuti akanaka.”—Pis. 106:1.
^ ndima 10 Mamwe mazita ari munyaya ino akachinjwa.
Nei vaKristu vechokwadi vachifanira kuramba vachinyengetera? Ndiani anobatsirwa paunonyengeterera vamwe?